Ụgbọala Na-Ebu Ndị Njem Amakpuola Ọhịa n'Anambra | Igbo Radio
Ọ bụ nnọọ ihe ịhe ịtụrụ Chineke mmamma maka ọrụ ọma ya n'ịzọpụta ụmụ mmadụ, dịka ihe mberede okporo ụzọ dị oke egwù dapụtara na steeti Anambra na nsonso a.
Ya bụ ihe mberede okporo ụzọ dápụtara ahụ bụ nke mere n'okporo ụzọ awara-awara ahụ siri Enugu gaa Ọnịtsha, oge ụgbọala 'Toyota Hiace Bus' gbakatara n'ụzọ, gbabazie n'ọhịa.
Dịka ozi si n'aka onye na-ahụ maka nkuzi na mgbasaozi n'ụlọọrụ 'Federal Road Safety Corps (FRSC)' n'Anambra, bụ Maazị Pascal Anigbo siri kọwaa, ya bụ ụgbọala jiri ọsọ kwopụ n'okporo ụzọ, gbabàá ọhịa, ma ga sụkanye isi n'otu olulu mmiri dị n'ime ọhịa ahụ.
Ụgbọala ahụ nwéré akàrà FGG357ZD ka e kwuru na o bù mmadụ atọ n'ime ya oge ahụ ya bụ ihe mberede dapụtara, mana o nweghị onye ọbụla n'ime ha nwụrụ; naanị mmadụ abụọ n'ime ha nwetara mmerụ ahụ, bụkwa ndị e buru gaa ụlọọgwụ maka ileru ha anya.
Dịka onye ọnọ mgbe o mere siri kọwaa, ọ bụ ịgba oke ọsọ kpatara ya bụ ihe mberede, n'ihi na onye na-anya ya bụ ụgbọala na-agba ajọ ọsọ, nke na o enweghịzị ike ijidenwu ya, wee ruzie mgbe ọ pụnahịrị n'aka ya, wee makpuo ọhịa ahụ, ga sụnye isi n'olulu mmiri.
N'akụkọ dịkwa ka ibe ya, ihe mberede okporo ụzọ ọzọ dapụtakwàrà na mpaghara ihu obi gọọmenti steeti Anambra, dịka ụgbọala ọzọ dakpùru ọwà mmiri dị n'akụkụ ụzọ awara-awara ahụ siri Enugu gaa Ọnịtsha.
Ya bụ ụgbọala gwongworo nwéré akara NSH146XJ ka e kwuru na o nwere ihe mberede ahụ oge otu ụkwụ ya gbapuru n'ike dịka ọ nọ n'ọsọ; o wee buzie onwe na-anya ya aka, wee dakpunye n'ime ọwa mmiri ahụ.
Kaọsiladị, o nweghị onye ọbụla n'ime mmadụ abụọ nọ n'ụgbọala ahụ nwụrụ maọbụ nweta mmerụ ahụ.
N'okwu ya banyere ihe mberede ndị ahụ, onyeisi ụlọọrụ FRSC na steeti ahụ bụ Maazị Andrew A. Kumapayi kpọkukwazịrị ma dụọ ndị na-anyà ụgbọala ka ha na-akpachapụrụ ụgbọala nke ọma, zeere ịgba oke ọsọ, ma jirikwa uchè na-anya ụgbọala, ọkachasị ugbu a a nọ n'oge udummiri, n'ihi na ala na-amịa amị. O kwuru na ihe ndị ahụ so n'ihe na-eweta ihe mberede okporo ụzọ aghara aghara, ma nye ndụmọdụ ka ndị na-anya ụgbọala zèére ihe ndị ahụ ma kpachapụ anya ya, iji belata oke ndapụta ihe mberede okporo ụzọ.